Accesories - Delta Ngwa teknụzụ
Archive si udi "Akaụntụ"
Ngwunye ngwa DAG 003 dabara adaba na mkpocha akpaka, fesaa ya na ngwa nke ihe abuo di n’ime ya. A na-ejikarị egbe ahụ ejiri ndị na-agwakọta static mee, mana enwere ike idozi ya maka ịgwakọta dị egwu.
Ejiri egbe a n'ụdị modulu ma nwee nhọrọ dị iche iche iji gboo mkpa ngwa niile. Ọ nwere ike iguzogide nrụgide kachasị nke 300 mmanya.
Maka nkọwa ndị ọzọ gbasara ọrụ aka, biko lee pdf-folda n'okpuru.
Emepụtara egbe a maka ndị ọrụ kwa ụbọchị nke katọn aluminom ọkọlọtọ. Mgbe oriri nke nrapado abụghị nke buru ibu ịgbanwe pail 20 L, egbe a bụ ihe mgbochi zuru oke.
Onye na-arụ ọrụ ekwesighi itinye ụdị ikike ahụ ọzọ ọzọ iji kwapụ ihe nrapado ahụ, ebe ọ bụ na a na-ebugharị egbe ahụ ma nwee njiri ergonomic. Ọzọkwa, n'ihi mmụba mgbali elu, enwere ike iji egbe ahụ maka mmiri viscous dị elu.
Dika enwere ike ịhazi egbe okpomoku site na 20 Celsius ruo 90 Celsius C, enwere ike iji egbe ahụ mee ihe maka ngwa na oyi.
bipụtara Njikwa ego
Anyị na-enye ọtụtụ ihe igwekota na nrụnye igwekota iji nwee ike itinye ihe mgbakwunye dị ka ụcha, akwa, plasta, wdg na ngwaahịa gị iji nye ya akụrụngwa ịchọrọ.
Vesselsgbọ ndị na-enye nsogbu ma ọ bụ tankị nchekwa anyị na-enye bụ nchara anaghị agba nchara (304 ma ọ bụ 316), nke nwere dayameta nke 140 mm, 200 mm, 300 mm na 400 mm.
Ọtụtụ nhọrọ ga - ekwe omume ebe a, ọ dabere na ihe ọ bụla chọrọ ma chọọ maka onye ahịa ahụ. Offọdụ n'ime nhọrọ ndị ahụ bụ: larịị nchọpụta na-enweghị kọntaktị na ngwaahịa, igwekota ma ọ bụ recirculation na-akụkụ na nkwusioru, agụụ,…